Unofanira Kudzidza nezvaMwari
Kuti uve shamwari yaMwari, unofanira kudzidza nezvake. Shamwari dzako dzinoziva zita rako uye dzinorishandisa here? Dzinodaro. Mwari anoda kuti iwewo uzive uye ushandise zita rake. Zita raMwari ndiJehovha. (Pisarema 83:18; Mateu 6:9) Unofanirawo kudzidza zvaanoda nezvaasingadi. Unofanira kuziva kuti shamwari dzake ndivanaani uye kuti vavengi vake ndivanaani. Zvinotora nguva kuti usvike pakuziva mumwe munhu. Bhaibheri rinoti kuchenjera kutsaura nguva yokudzidza nezvaJehovha.—VaEfeso 5:15, 16.
Shamwari dzaMwari dzinoita zvinomufadza. Chimbofunga nezveshamwari dzako. Kana uchidziitira zvakaipa nokuita zvinhu zvadzinovenga, dzicharamba dziri shamwari dzako here? Chokwadika kwete! Saizvozvowo, kana uchida kuva shamwari yaMwari, unofanira kuita zvinomufadza.—Johani 4:24.
Hazvisi zvitendero zvose zvinotungamirira kuushamwari naMwari. Jesu, uyo ari shamwari yaMwari yapedyo zvikuru, akataura nezvemigwagwa miviri. Mumwe mugwagwa muhombe uye wakazara navanhu. Mugwagwa iwoyo unotungamirira mukuparadzwa. Mumwe mugwagwa mutete uye une vanhu vashoma vari kufamba pauri. Mugwagwa iwoyo unotungamirira kuupenyu husingaperi. Izvi zvinoreva kuti kana uchida kuva noushamwari naMwari, unofanira kudzidza nzira yakarurama yokumunamata nayo.—Mateu 7:13, 14.